(၁)ကြွင်း ဗုဒ္ဓဟူး မရဏဖွားဥာဉ် Tin Hlaing Oo(Thayet) — Steemit
(၁)ကြွင်း ဗုဒ္ဓဟူး မရဏဖွားဥာဉ် Tin Hlaing Oo(Thayet)
(၁) ကြွင်း ဗုဒ္ဓဟူး မရဏဖွားဥာဉ်
(၁)ကြွင်း ဗုဒ္ဓဟူး မရဏဖွားဥာဉ်သည်  ဗုဒ္ဓဟူး (၄)ဂဏန်း၏ အဓိပ္ပါယ်အရ လူ၊ လူအစုအဝေး (မိမိ အပါအဝင် လူမှန်သမျှနှင့် သက်ဆိုင်နေသည်)။
မရဏအိမ်သည် ချုခြာ ပျော့ညံ့ သည်းမခံနိုင်မှု ဟုဆိုသဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့်အဓိကသက်ဆိုင်နေပါသည်။ စိတ်မခိုင်မာခြင်း၊ ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း၊ သည်းမခံနိုင် ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် (၁)ခုကြွင်း ဗုဒ္ဓဟူးမရဏဖွားဥာဉ်သည် လူဆိုသည့်အတွက် မိသားစု၊ အိမ်ထောင်ဖက်၊ သားသမီး၊ ဆွေမျိုး များအပါအဝင် လူအစုအဝေး၊ အသင်း အဖွဲ့များနှင့် ကြာရှည်စွာ အနီးကပ်ပူးတွဲလာကြပါက ဟန်မဆောင်တတ်ခြင်း၊ စိတ်မထိန်းနိုင်ခြင်း၊ သည်းမခံတတ်ခြင်းတို့ကြောင့် အပြိုင်အဆိုင်၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုများ ဖြစ်ကာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၌ အခက်အခဲများဖြစ်ကြရမည်။ အရွယ်သုံးပါးလုံး မိဘ အုပ်ထိန်းသူများနှင့် အနီးကပ်ပူးတွဲနေထိုင်၍မရခြင်း၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မ ဆွေမျိုးရင်း ချာများနှင့် ပူးတွဲနေထိုင်၍မရခြင်း၊ မိမိအတွက်ယုံကြည်သူမွေး၍မရ၊ ထား၍မရခြင်း၊ အိမ်ထောင်ဖက်၊ အတူနေသားသမီးများနှင့် ဆူပူဆန့်ကျင်၍ မကြာခဏ ရန်ဖြစ်ရခြင်း၊ အိမ်ငှားနေထိုင်သူဖြစ်က အိမ်ရှင်အိမ်ငှား ပြဿနာမကြာခဏဖြစ်ရခြင်း၊ ရပ်ရေး ရွာရေး တွင်လည်း မသင့်မြတ်မှုများနှင့် အခက်အခဲများကြုံရခြင်း၊ လုပ်ငန်းစီးပွားရေးအတွင်း တွင်လည်း လူမှုဆက်ဆံရေးကြောင့် တည်ငြိမ်မှုမရှိ၊ အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲရခြင်း။ အနီးကပ်ပူးတွဲပေါင်းသင်းသူမိတ်များလျှင်များသလောက် အရှုပ်အရှင်း ပြဿနာ အမျိုးမျိုးဖြစ်ရခြင်းတို့ ကြုံရပေမည်။
မရဏအဖွားဥာဉ်(လူ)အဆိုးအား အလွန်ကောင်းပါက (၁)ကြွင်း မရဏဖွား ကျား၊ မအားလုံးတို့သည် တရားမဝင်ဖြတ်လမ်းစီးပွားရေးများ၊ အရက်သေစာ၊ အပျော် အပါးလောင်းကစားများနှင့် လုံးဝမတည့်သောသူများဖြစ်သောကြောင့် လွတ်ကင်း အောင် ရှောင်ရှားသင့်ကြပေသည်။ အကယ်၍သာမှားယွင်းလုပ်ဆောင်မိကြပါက ခိုက်ရန်ဒေါသ၊ ထောင်၊ အမှုအခင်းများဖြစ်ကြရပြီး ဘဝပျက်ပြုန်းကာ အသက်ဆုံးရှုံး တတ်ကြောင်းကို ထိုးထွင်းသိမြင်ကြရပေမည်။
Notacopy, manually write.
Congratulations @tinhlaingoo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
mgtoetat (54) ·7months ago
တတ်ထားရင် အချိန်မရွေး သုံးလို့ရပါတယ်ဗျာ။
ပညာရပ်‌‌တွေက အသုံးချတတ်‌ရင်‌ တန်‌ဘိုးရှိပါတယ်‌။‌ကျေးဇူးပါဆရာ။
ဆရာ စနေသား အဓိပတိဖွားကိုမျော်နေပါတယ်
ဒါက ဟောကွက်မျာစဉ်စားဖို့ အခြေခံ စိတ်ထားတွေကိုပဲရေးပေးထားတာပါ။ ဟောချက်အဖြစ်ယူဆလို့မရပါ။
minsoenaing (62) ·7months ago
သားသားအတွက် တွက်ပေးချင်ပါတယ် ဆရာ
ဆရာ့ Block မှာ တရားဝင်မေးလို့ရပါတယ်ဗျာ။
တစ်ဝကြီးပေးချင်ပါတယ်၊ မဖတ်ကြလို့ ခွဲပေးနေရတာပါဗျာ။
domelay (61) ·7months ago
ဗေဒင်ဆြာ လုပ်တော့ဘု အများကြိဘဲ့
များတာ နဲတာ မဓိကမကျပါဘူးကွာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုသာ အဓိကပါ။
This post has receiveda4.84 % upvote from @boomerang.
aggamun (58) ·7months ago
ကျနော် အတွက်ကတော့ ဒီဟောကွက်လေးနဲ့တင် မှန်နေပါပြီဗျာ လောင်းကစားက တော့ ပြောမနေပါနဲ့ တော့ ဆရာရေ လုံးဝ ကို အကျိုးမပေးတာ ငယ်ငယ် ကတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိထားမိတယ်ဗျာ
ဒီ မဟာဘုတ်ပညာ ကို pdf လေးဖြစ်ဖြစ် စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ် ရေးပြီးသားလေးများ ရှိပါသလား ဆရာ
ပြီးတော့ သူရဇ္ဇ သောကြ ဗုဒ္ဓ ဆိုပြီး အချိန်ခွဲတာ ဆရာ ဘယ်လို ခွဲပါသလဲ ခင်ဗျ
မနက် ၆ ည ၆ လား ဒါမှမဟုတ် မနက် ၁၂ ည ၁၂ လား ဆရာ အချိန်ပိုင်းပုံလေး သိပါရစေ